विवाह पछि किन बढ्छ तौल ? यस्ता रहेछन् कारण - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / समाचार / विवाह पछि किन बढ्छ तौल ? यस्ता रहेछन् कारण
हामी सबैले भोगेका र देखेका छौं कि विवाह पछि महिला पुरुष दुबैको तौल बढ्छ । तौल बढ्नुमा सबैले आ–आफ्नै किसिमका तर्क दिने गर्दछन् । यस्तोमा धेरैजस्तो मनगढन्ते हुने गर्छ । अब यससँग सम्बन्धी अनुसन्धान पनि भइसकेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्षभित्र करिब ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । दैनिक भाष्करमा तोषी व्यास कुरन्नेले यसको कारण केलाएकी छिन् ।
विवाह पछि १–२ वर्षभित्र धेरैजसो जोडी फ्यामिली प्लानिंग गर्छन् । गर्भवतीको क्रममा महिलाको तौल निकै बढ्ने गर्दछ । पछि व्यस्त हुने भएकाले आफैंलाई फिट राख्न सजिलो हुँदैन ।
बारम्बार भोक लाग्छ भने
विवाह दर्तामा गृहको…
आफूभन्दा ठूला उमेरका…
“जिवन साथी त चाहिदो…
पेटमा पुगेपछि औषधी के…
Related ItemsBusinessdigital khabarhappy coupleHealthInternationalNationalNepalNewsPoliticsWorld
← Previous Story सोमबार र शिव भगवान बिचको सम्बन्ध के, किन हुन्छ यो यति पवित्र ?
Next Story → त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेनाको निगरानीमा !